Quarantine ဝင်နေရချိန် မြေးလေးနဲ့ ဇနီးသည် စိတ်ချမ်းသာရအောင် ပြောတတ်တဲ့ ဇော်ဝင်းထွဋ်အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဝင်းထွဋ်တာရာ - Cele Connections
အဆိုတော်ကြီး ဇော်ဝင်းထွဋ်ကတော့ Covid – 19 Positive လူနာနဲ့ ထိတွေ့မှုရှိခဲ့တာကြောင့် သူ့ဆန္ဒနဲ့သူ Quarantine (၂၁) ရက် နေထိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေကတော့ ဇော်ဝင်းထွဋ်အတွက် စိတ်ပူပန်မှုတွေ ရှိနေပေမယ့် ဇော်ဝင်းထွဋ်ကတော့ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ပုံမှန်အခြေအနေအတိုင်းရှိနေဆဲပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ သမီးဖြစ်သူ ဝင်းထွဋ်တာရာက ဇနီးနဲ့ မြေးကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ပြောတတ်တဲ့ သူမရဲ့ ဖေဖေအကြောင်းကို အခုလိုပဲ ပြောပြထားပါတယ်။
“ဘိုးဘိုးသွားမယ်ဆိုတော့ မမကေသရာက ငိုယိုပြီး သောင်းကျန်းတာ ဝက်ဝက်ကွဲပေါ့! ဘွားဘွားကလဲ မျက်နှာမကောင်းဘူးပေါ့! အဲဒီမှာ ဘိုးဘိုးက ပြောတယ် “ဘိုးဘိုးက ဘိုးဘိုးနဲ့ ဘွားဘွားနဲ့ စတွေ့တဲ့ နေရာ…ဒိတ်ခဲ့တဲ့ နေရာမှာ ခဏလေးပဲ သွားနေမှာနော်” တဲ့! ခဲတစ်လုံးနဲ့ ငှက်နှစ်ကောင်ကို ပစ်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ပြောတာ နေမှာ!” ဆိုပြီး ဝင်းထွဋ်တာရာက သူမရဲ့ ဖေဖေ ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့အပြောကို သဘောကျနေရှာပါတယ်။
ဇော်ဝင်းထွဋ်ကတော့ တကယ့်ကို ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်ကြီး ဇော်ဝင်းထွဋ်တစ်ယောက် ကျန်းမာစွာနဲ့ အိမ်ကို ပြန်နိုင်ပါစေလို့ Cele Connections မှ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source: Win Htut Tara’s fb
Quarantine ဝငျနရေခြိနျ မွေးလေးနဲ့ ဇနီးသညျ စိတျခမျြးသာရအောငျ ပွောတတျတဲ့ ဇျောဝငျးထှဋျအကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ ဝငျးထှဋျတာရာ
အဆိုတျောကွီး ဇျောဝငျးထှဋျကတော့ Covid – 19 Positive လူနာနဲ့ ထိတှမှေု့ရှိခဲ့တာကွောငျ့ သူ့ဆန်ဒနဲ့သူ Quarantine (၂၁) ရကျ နထေိုငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှနေဲ့ မိသားစုဝငျတှကေတော့ ဇျောဝငျးထှဋျအတှကျ စိတျပူပနျမှုတှေ ရှိနပေမေယျ့ ဇျောဝငျးထှဋျကတော့ ကနျြးကနျြးမာမာနဲ့ ပုံမှနျအခွအေနအေတိုငျးရှိနဆေဲပါ။ ဒီနမှေ့ာတော့ ဇျောဝငျးထှဋျရဲ့ သမီးဖွဈသူ ဝငျးထှဋျတာရာက ဇနီးနဲ့ မွေးကို စိတျခမျြးသာအောငျ ပွောတတျတဲ့ သူမရဲ့ ဖဖေအေကွောငျးကို အခုလိုပဲ ပွောပွထားပါတယျ။
“ဘိုးဘိုးသှားမယျဆိုတော့ မမကသေရာက ငိုယိုပွီး သောငျးကနျြးတာ ဝကျဝကျကှဲပေါ့! ဘှားဘှားကလဲ မကျြနှာမကောငျးဘူးပေါ့! အဲဒီမှာ ဘိုးဘိုးက ပွောတယျ “ဘိုးဘိုးက ဘိုးဘိုးနဲ့ ဘှားဘှားနဲ့ စတှတေဲ့ နရော…ဒိတျခဲ့တဲ့ နရောမှာ ခဏလေးပဲ သှားနမှောနျော” တဲ့! ခဲတဈလုံးနဲ့ ငှကျနှဈကောငျကို ပဈတယျဆိုတာ ဒါမြိုးကို ပွောတာ နမှော!” ဆိုပွီး ဝငျးထှဋျတာရာက သူမရဲ့ ဖဖေေ ဇျောဝငျးထှဋျရဲ့အပွောကို သဘောကနြရှောပါတယျ။
ဇျောဝငျးထှဋျကတော့ တကယျ့ကို ပြျောစရာကောငျးတဲ့ မိသားစုလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ အဆိုတျောကွီး ဇျောဝငျးထှဋျတဈယောကျ ကနျြးမာစှာနဲ့ အိမျကို ပွနျနိုငျပါစလေို့ Cele Connections မှ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
မိခင်ဆေးဖိုးရဖို့အတွက် လူသွားလမ်းမှာ သီချင်းဆိုရင်း ပိုက်ဆံရှာနေရတဲ့ သားတစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီး တတ်နိုင်သလောက် ကူညီလှူဒါန်းမယ်ဆိုတဲ့ ယုန်လေး
ညီလေး၊ ညီမလေးတွေအတွက် အာဇာနည်နေ့အကြောင်းကို သေသေချာချာရှင်းပြပေးခဲ့တဲ့ ရွှေပိုင်လေးရဲ့ ဗီဒီယို